Southchip သည် Shanghai Star Market တွင် IPO ခွင့်ပြု ခဲ့သည် - Pandaily
Southchip သည် Shanghai Star Market တွင် IPO ခွင့်ပြု ခဲ့သည်
Jun 22, 2022, 13:07ညနေ 2022/06/22 14:01:51 Pandaily
ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ဖော်Shanghai Southchip Semiconductor Technology Co., Ltd. ၏ စာရင်း လျှောက်လွှာလက္ခံ ၿပီးသား ပါ။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အစုရှယ်ယာ ၆၃. ၅၃ သန်း ထက်မပို သော အများပိုင် ရောင်းချ ရန်ရည်ရွယ် ထားပြီး စုစုပေါင်း ရန်ပုံငွေ သည်ယွမ် ၁. ၆ ၅၈ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၄၆. ၈ သန်း) ထက်မပို စေ ရ။ ဤ ပြ issue နာ ၏ စပွန်ဆာ မှာ China Capital Management ဖြစ်သည်။
အလားအလာ အရ Southchip သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း analog နှင့် embedded chip ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီများ အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ ၏လက်ရှိ ထုတ်ကုန် များတွင် charging management chips, charging protocol chips နှင့် lithium battery management chips များပါ ၀ င်သည်။ ထုတ်ကုန်များကို အဓိကအားဖြင့် စမတ်ဖုန်း များ၊ မှတ်စု စာအုပ် ကွန်ပျူတာ များ၊ တက်ဘလက် ကွန်ပျူတာ များ၊ ပါဝါ adapters များ၊ စမတ် ၀ တ်ဆင် နိုင်သော ပစ္စည်း များနှင့်အခြား စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် နယ်ပယ် များ၊ စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် များ၊။ ၎င်းတို့အနက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ အားသွင်း စုပ်စက် အားသွင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ချစ်ပ် ၏ ၀ င်ငွေသည် ၆၀. ၄၁% ရှိသည်။
မှတ်သား သင့် သည်မှာ USB-PD ငွေတောင်းခံ မှု စီမံခန့်ခွဲ မှု၏ အစောဆုံး တရုတ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ကွဲပြားခြားနားသော terminal ပစ္စည်းကိရိယာ လိုအပ်ချက် များကိုထောက်ပံ့ ရန် ငွေတောင်းခံ မှု စီမံခန့်ခွဲမှု ချစ်ပ် များ ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်း စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် အားသွင်း မှု စီမံခန့်ခွဲမှု စျေးကွက် ၏ ကျောရိုး ဖြစ်လာသည်။ Frost & Sullivan ၏အဆိုအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တင်ပို့ ရောင်းချ မှုအရ ကုမ္ပဏီ၏ charging pump charging management chip သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံပါတ် တစ် နေရာတွင် ရှိပြီး Buck-Boost charging management chip သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ နှင့် ပြည်တွင်း ၌ နံပါတ် တစ် နေရာတွင်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi Surge P1 Chip ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သုတေသန သဘာဝ ကို မေးခွန်းထုတ် ခံရ
ဘဏ္ data ာရေး အချက်အလက်များအရ Southchip သည် ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင် ယွမ် ၁၀၇ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၅. ၉၄ သန်း) ၊ ၁ ၇၈ သန်း (ဒေါ်လာ ၂၆. ၅ သန်း) နှင့် ယွမ် ၉ ၈၄ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၄၆. ၅ သန်း) အသီးသီး လည်ပတ် ခဲ့သည်။ အသားတင် အမြတ် က-9 ပါ။ ယွမ် ၈ ၅၃. ၄ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၄၇ သန်း) ၊ ၇. ၉ ၇၅ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၁၉ သန်း) နှင့် ယွမ် ၂ ၄၄ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆. ၃၃ သန်း) တို့ဖြစ်သည်။
Southchip ရှယ်ယာရှင် များ ထိုကဲ့သို့သော Suzhou Orisa Holding ကော်ပိုရေးရှင်း, Suzhou Juyuan Foundry Venture Capital Partnership (L.P.), Shunwei Technology, Shenzhen Sequoia Hanchen Equity Investment Partnership (L.P.) အဖြစ် လူသိများ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များပါဝင်သည်။ Longqi Technology, Intel, ZMI, Shanghai Moqin Intelligent Technology Co., Ltd., Xiaomi Fund, OPPO Communication နှင့်အခြား စက်မှု အရင်းအနှီး အဖွဲ့အစည်းများ လည်းပါ ၀ င်သည်။
Southchip က ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ခြင်းကို အဓိကအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော အားသွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှု ချစ်ပ် များ၊ မြင့်မားသော ပေါင်းစည်း ထားသည့် AC/DC chipset များနှင့် မော်တော်ယာဉ် အီလက်ထရောနစ် ချစ်ပ် များ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း များ၊ စမ်းသပ် စင်တာ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း များနှင့် ဖြည့်စွက် ငွေ ဖြစ် လွယ် မှု စီမံကိန်း များအတွက် ရည်ရွယ် သည်ဟုဆိုသည်။